ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိလာပြီ
By mmweather.ygn, on October 4th, 2012%
အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်အတွင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့တွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း Global Tropical Hazards Outlook မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်(အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်)တွင်လည်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပြီး လတ်တလော အချိန်တွင်လည်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် မုန်တိုင်း Maliksi နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် မုန်တိုင်း GAEMI တို့ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိရာ Maliksi မှာ ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားတော့မည့် အခြေအနေရှိနေပါသည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း GAEMI(21W) မှာမူ အနောက်ဘက်သို့ ချိုးကွေ့ ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်အား ဖြတ်သန်းလျှက် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား လာမည့် ၇၂ နာရီအတွင်း . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌ မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေရှိလာပြီ
Leaveacomment Uncategorized စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်အထိ GTHO ခန့်မှန်းချက်
Global Tropical Hazards Outlook ရက်သတ္တပတ်-၁ (စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ) အရှေ့တောင်အာရှဒေသများ – ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ပစိဖိတ် အနောက်ပိုင်းဒေသများအထိ ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုထက် ပိုမိုနေနိုင်ပြီး၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အရှေ့ပိုင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုထက် မိုးလျော့နည်းနေနိုင်မည်ဟု လက်ရှိ MJO (Madden–Julian oscillation ခန့်မှန်းချက်) ကိုအခြေခံသည့် ခန့်မှန်းချက်အား Global Tropical Hazards Outlook မှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Global Tropical Hazards Outlook ရက်သတ္တပတ်-၂ (စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်အထိ) ဒုတိယ ရက်သတ္တပတ် အဆုံးတွင် ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းဒေသများအတွက် မိုးပိုမိုလာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်ထက်ပိုမိုသည့် မိုးရွာသွန်းမှုများအား ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ . . . → Read More: စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်အထိ GTHO ခန့်မှန်းချက်
Leaveacomment Uncategorized Global Tropical Hazards Outlook မှ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် အကျဉ်း
By mmweather.ygn, on September 12th, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်မှ – စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် အထိ Global Tropical Hazards Outlook မှ ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ၊ အိန္ဒိယ တောင်ပိုင်းမှ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ အနောက်ပစိဖိတ်ဒေသအထိ ပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုထက် ပိုပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း၊ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်ဒေသတွေမှာတော့ ပုံမှမိုးရွာသွန်းမှုထက် လျော့နည်းမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Above average rainfall is forecast from southern India to the Philippines into the western Pacific, while below average rainfall is forecast for the eastern equatorial Indian Ocean and . . . → Read More: Global Tropical Hazards Outlook မှ ရာသီဥတု ခန့်မှန်းချက် အကျဉ်း
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W နှင့် မိုးလေဝသ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on September 11th, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း Palau ကျွန်း မြောက်ဘက် မိုင် ၁၄၀ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၉၇၀ ခန့်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W(SEVENTEEN) ဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ၂၄ နာရီအတွင်း(စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၀၃၀ နာရီ) မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
17W SEVENTEEN (NRL data) 11 Sep 2012 0000Z Location: 9.4 134.3 Winds: 30 . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W နှင့် မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized LOW PRESSURE TROUGH LINE နှင့် မိုးလေဝသအခြေအနေ
By mmweather.ygn, on September 7th, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၀၃၀ နာရီ(6SEP-1800 UTC)တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် မိုးလေဝသ မြေပုံအရ Low Pressure Trough Line (မြန်မာမိုးဇလမှ လေဖိအားနည်း မြောင်တန်းဟုခေါ်မည်ထင်ပါသည်) သည် တောင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်များမှ လေ့လာချက်များအရ LPTL(Low Pressure Trough Line) တောင်ဘက်သို့ ဆင်းလာပြီးမကြာမီကာလမှာပင် မုတ်သုံလေ စတင်ဆုတ်ခွာပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ၊ မုန်တိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထိုင်းမိုးလေဝသ မြေပုံအရ တနင်္သာရီတောင်ပိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် LPTL ၏ ကုန်းတွင်း လေဖိအားနည်းဆဲလ် တစ်ခုကို တွေ့ရရှိရပြီး အမြင့်ပေအလိုက် လေစီးကြောင်း . . . → Read More: LOW PRESSURE TROUGH LINE နှင့် မိုးလေဝသအခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W နှင့် 95W
Leaveacomment Uncategorized မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း မိုးလေဝသ အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on May 7th, 2012%
ရန်ကုန် – Yangon Mingladon – Latest Weather Observations 31 °c Patchy rain nearby Wind:7mph from the WNW Humidity: 71% Pressure: 1006 mb Cloud Cover: 100%% Visibility: 8km P.O.P: 97% Sunrise: 05:38 AM Sunset: 06:27 PM
ဘားအံ – Pa-An – Latest Weather Observations 27 °c Light rain shower Wind:4mph from . . . → Read More: မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း မိုးလေဝသ အခြေအနေ
One comment Uncategorized မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ။
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးဟာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းရယ်ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးမျိုးမဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပုံမှန် မိုးတွင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်တိုက်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်မှာ တိမ်များတစုတဝေးတည်းဖြစ်နေခြင်း၊ တိမ်တိုက်အမြင့် ထူထပ်သိပ်သည်းခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တိမ်တိုက်ကြီးဟာ တောင်နှင့်မြောက်အရှည်(475)မိုင်ခန့် ရှည်လျှားပြီး အကျယ်အရှေ့နင့်အနောက်(588)မိုင်ခန့် ကျယ်ပြန့်ပြီးအရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းသို့ ရွေ့လျှားလျှက်ရှိပါသည်။
ထိုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများတွင် အခုမှစတင်ပြီးနောက် နှစ်ဆယ်လေးနာရီအတွင်း ဖေါ်ပြပါဒေသများတွင်မိုးကြီးနိင်ခြင်း၊ အချိန်အကြာကြီးမိုးရွာသွန်းနိုင်ခြင်း၊ မိုးလေ၀သမြေပုံများအရ ရန်ကုန်ုတိုင်းဒေသကြီးအတွင် တချို့တိမ်တိုက်အမြင့်မှာ အလွန်မြင်မားနေပြီး အပူချိန်မှာလည်း ထိုအမြင့်လောက်တွင်(-60)လောက်အထိ ကျဆင်းနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်၊ထိုကြောင့်အချို့သောနေရာတွေမှာ ရုတ်တရက်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးချွတ်ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့် သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြစ်ပြောရမည်ဆိုလျှင် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောလက်ရှိအခြေအနေမှာ မည်သည့်လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း၊ မည်သည့်မုန်တိုင်းမှ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့်၊ မိုးရွာသွန်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ ထိုကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်များမှ လေမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရေဒီယိုချယ်နယ်တခုမှ ထုတ်လွင့်နေသည့် ကောလဟာလများမှာ မမှန်ကန်ပါ ရာသီဥတုဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်ကို . . . → Read More: မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ။